Nasandratra Ho Andriamanitra, Avy Eo Tsy Izy Intsony: Miverina Amin’ny Andavanandrom-Piainana Ilay ‘Kumari’ Nandritry ny Sivy Taona Tao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2017 4:16 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, Français, Italiano, Português, русский, Español, Ελληνικά, Nederlands, English
Ilay tovovavy Matina Shakya no Kumari, andriamanibavy velona tao Kathmandou, renivohitr'i Népal , Nandritra ny sivy taona. Ankehitriny, niverina an-tsekoly izy, izay efa nataony rahateo talophan'ny nanandratana azy ary tsy maintsy hiaina ny fiainana andavanandron'ny ankizivavy iray mpianatra, toy ny hafa rehetra
Tamin'ny 2008, teo amin'ny fahatelo taonany i Matina no nofidiana tao anatin'ny foko bodista Shakya ho toy ny endrika ara-nofon'i Taleju, ilay andriamanibavy hindoa. Dingana henjana ny fifantenana, tarihan'ireo pretra sy mpandinika ny kintana nandritry ny taonjato maro. Avy eo i Matina dia niankohofana ho toy ny Kumari, na andriamanibavy velona [fr], mandrapandehan'ny fadimbolany voalohany, fotoana inoana fa hoe ialàn'ilay andriamanibavy tsy ho ao amin'ny vatan'ilay tovovavy.
Araka ny angano Nepaley iray, nahazatra an'i Jaya Prakash Malla, ilay mpanjaka Malla tao Kathmandou (fianakaviana mpanjaka tamin'ny taonjato faha-12 hatramin'ny faha-17), ny milalao kodihakely niaraka tamin'ny andriamanivabavy Taleju. Indray andro, nanaraka azy ny vadin'ny mpanjaka ary nahita an'ilay andriamanibavy, izay nandràra ny mpanjaka tsy hiteny na amin'iza na amin'iza momba ny fihaonan'izy ireo. Tezitra i Taleju ka nampitandrina ny mpanjaka hoe raha te-hahita azy indray izy na hiantoka ny fiarovana ny fanjakàny, dia tsy maintsy mikaroka ny fitsanganany ho velona any anatinà ankizivavy kely iray ao anatin'ny foko Shakya. Tao anatin'ny fanantenany hampitony ilay andriamanibavy, nandeha nitady izay ankizivavy kely manana ireo toetoetran'i Taleju ny mpanjaka, ary io fomba io no mbola tohizana hatramin'izao.
Manoratra i Pramod Bhattaraisy Bijay Shrestha fa mba ho voafidy ho andriamanibavy Kumari ny ankizivavikely iray dia tsy maintsy mitoetra ao anatiny ireo “toetra roa amby telopolo tonga lafatra”:
Ilay Kumari fahiny, Rashmila Shakya, nanoratra ny tantaram-piainany “Tsy Andriamanitra Intsony Fa Nofo Sy Rà Mety Maty: ny Tena Tantaram-Piainan'ny Kumari Mpanjaka Fahiny”, dia niezaka nanova ny fomba fijerin'ny sarambabem-bahoaka sy nanentana ny olona hijery ny tena zavamisy iainana rehefa lasa andriamanibavy. Soritan'i R. Shakya ny tsy fahampian'ny fanabeazana an'ireo Kumari ary faritany ireo fahasarotana amin'ny fiverenana any an-tsekoly raha tsy manana ny fahalalàna ilaina mba hahombiazana.
Araka ny lazain'i Sthapit, Matina Shakya dia tovovavy kely marani-tsaina izay tafiditra tsara mihitsy anaty fiarahamonina, na teo aza ny zavanisy rehetra.
Raha mbola mizatra miaina ho toy ny ankizivavy mpianatra ‘toy ny rehetra’ sy hiaina indray any an-tokantranony i Matina Shakya, efa voatendry ho Kumari vaovao ao Kathmandou ilay ankizivavy kely Trishna Shakya, eo amin'ny fahatelo taonany.